Aha: Carbomer Carbopol Carbomer 10 bụ ntụ ntụ na-acha ọcha, njikọta polyacrylic acid njikọta nke a na-eme ka polymerized na usoro nchịkọta cosolvent nke kachasị mma. Njirimara ya na-eme onwe ya na obere ájá na-eme ka ọ dị mfe iji rụọ ọrụ nke ọma. Ọ bụ onye na - eme mgbanwe dị omimi nke na - enye ezigbo viscosity na ụdị mmiri na - acha ọcha ma ọ bụ mmiri na - egbu egbu na ude mmiri. Ya obere eruba, na-abụghị ntapu Njirimara dị mma maka ngwa dị ka gels doro anya, hydroalch ...
Chemical mejupụtara ethylene oxide condensation Type Nonionic CAS 25322-68-3 Nkọwapụta nka na ụzụ Nkọwapụta （25 ℃ ra ColorandlustrePt-Co HydroxylvaluemgKOH / g Ihe omimi Mgbapụta cular Mmiri mmiri （%） PH uru1% Aqueous solution） PEG-200 Colorless transperent liquid ≤ 20 510 ~ 623 180 ~ 220 - ≤0.5 5.0 ～ 7.0 PEG-300 Mmiri mmiri na-enweghị ntụpọ less20 340 ~ 416 270 ~ 330 - ≤0.5 5.0 ～ 7.0 PEG-400 Colorless transperent mmiri mmiri 2520 255 ~ 312 360 ~ 440 4 ～ 10 ≤0.5 5.0 ～ 7.0 ...
A na-eji PEG-4000 eme ihe na mbadamba, ọgwụ, ihe nkiri, ọgwụ mgbochi, suppository, wdg. PEG-4000 na 6000 ka a na-eji dị ka ndị na-ahụ maka ọgwụ na ụlọ ọrụ ọgwụ, nkwadebe nke suppository na mado, ihe mkpuchi mkpuchi na ụlọ ọrụ akwụkwọ iji mee ka mpempe akwụkwọ na ịdị mma , mmako na ụlọ ọrụ roba iji mee ka mmanu na plasticity dị na ngwaahịa roba, belata ike oriri na nhazi na ịgbatị ndụ ọrụ nke ngwaahịa roba. Enwere ike iji ya dị ka matriks na ọgwụ na ihe ịchọ mma ụlọ ọrụ iji adju ...
Aha: Acrylates / C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer Carbomer1342 Carbopol1342 bụ acrylate copolymer gbanwere hydrophobically. Ọ nwere ogologo viscous eruba onwunwe, na-enye ndị magburu onwe ndim na suspending ike karịsịa na surfactant usoro na ụdị sachaa doo anya gels. Ihe onwunwe a na - eme ka ngwaahịa ahụ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka ngwọta mmiri ma ọ bụ dispersions nwere salts gbazee. Na mgbakwunye, ọ meziwanye ndakọrịta na ndozi na inye mkpụrụ uru ...
Ebu Yijie R-90 Esịtidem mmako akpụzi Hapụ Ukwu Series
Mejupụtara: metal ncha dabeere ngwakọta nke sịntetik surfactant Mpụga echiche: ọcha ntụ ntụ ma ọ bụ ahụ Nchekwa oge: afọ abụọ Ngwugwu: Mejupụtara Kraft akwụkwọ kpara akpa akpa Net Arọ: 25 n'arọ / akpa ọdabara roba ụdị Natural roba (NR), butadiene roba (BR ), Styrene-Butadiene Rubber (SBR), Isoprene Rubber (IR), Neoprene Rubber (CR), Butyl Rubber (IIR), EPDM, chlorosulfonated polyethylene roba (CSM), Fluororubber (FKM), nitrile roba (NBR) na recycled roba nwere ike etinyere na taya a ...
a na-akpọkwa ethylene glycol (ethylene glycol) "glycol", "1,2-ethylene glycol", nkebi dị ka EG. Usoro ọgwụ (CH2OH) 2 bụ diol kachasị mfe. Ethylene glycol bụ mmiri na-enweghị ntụ, na-enweghị isi ma na-atọ ụtọ, na-egbu egbu nye anụmanụ, ọnụọgụ mmadụ nke na-egbu mmadụ dịkwa ihe dịka 1.6 g / kg. Ethylene glycol nwere ike igbari mmiri na acetone, mana ya solubility na ethers dị obere. Ejiri dị ka ihe mgbaze, ihe na-egbochi ọgwụ mgbochi na akụrụngwa maka polyester sịntetik. Ngwongwo Anụ Ahụ ...
Jiaoyisan Pr-85 Mgbakwunye Dispersant Series
Njirimara ihe mejupụtara: ngwakọta nke ọla nchara nke sịntetik surfactant Ọdịdị: ọcha ma ọ bụ ihe na-acha edo edo Oge nchekwa Oge: a ga-echekwa ngwaahịa a n'ụlọ nkwakọ ngwaahịa ventilated, nke akọrọ na nke anaghị emebi emebi maka afọ abụọ. Nkwakọ ngwaahịa: nkwakọ ngwaahịa nke okpukpu abụọ nke akpa rọba na ihe ndị a kpara akpa akwụkwọ Akara Net: 25 n'arọ / akpa 1. Ọ nwere ike belata ikikere Mooney nke ngwongwo roba, meziwanye dispersibility nke carbon ojii na onye ọrụ ahụ, ma nye onyinye roba na bes ...
Jiaoyisan Pr-75 Mgbakwunye Dispersant Series
Njirimara ihe mejupụtara: ngwakọta nke ọla nchara nke sịntetik. Ọdịdị: ọcha / acha aja aja ahụ. Oge Nchekwa: a ga-echekwa ngwaahịa ahụ n'ụlọ nkwakọ ngwaahịa ventilated, akọrọ na-anaghị emebi emebi ruo afọ abụọ. Nkwakọ ngwaahịa: nkwakọ ngwaahịa nke okpukpu abụọ nke akpa plastik na akpa akpa ejiri. Net arọ: 25 n'arọ / akpa. 1. Ọ nwere ike belata Mooney viscosity nke roba, meziwanye dispersibility nke carbon ojii na onyinye gị n'ụlọnga, na-enyekwa roba onyinye na ...
Aha: acrylic acid (ester) / C10-30 alkyacrylate nke jikọrọ polymer Carbomer 1382 na-eji cyclohexane na ethyacetate dị ka ihe mgbaze, nke nwere ike inye otu nkwusioru na nkwụsi ike dị ka Carbomer1342. Dị ka a mmiri-soluble rheologicamodifier, o nwere magburu onwe ya ndim arụmọrụ na ìhè transmittance na mmiri-alcohosystem; N'otu oge ahụ, ngwaahịa ahụ nwere nnagide nnu dị mma na ndakọrịta ọma na surfactant; Ọ kachasị mma maka gel ịgba ọgwụ. Mmiri Alcohogel, ...
Aha: Carbomer990 Carbopol990 Carbomer 990 Carbopol 990 bụ polyacrylate polymer nwere njikọ gafere, polymerized na sistemụ mgbaze nke ethyl acetate na cyclohexane. Ọ nwere ike ịnye ezigbo viscosity, ọmarịcha ndozi na ịkwụsị ọrụ na obere usoro onunu ogwu. Ngwongwo ya dị mkpụmkpụ (nke na-abụghị drip) dị mma maka ngwa dị ka gels doro anya, mmanụ gas hydrococoholic, creams. Mgbe alkali na-eme ka ọ dị iche iche, ọ na-eme ka mmiri dị ọcha ma ọ bụ gels hydrococoholic gels na creams. Carbomer990 bụ a cr ...
Aha: Carbomer Carbopol Nkọwa nke Carbomer 276 bụ polyacylate polymer nwere njikọ nwere ike moisturizing siri ike, na-arụ ọrụ dị ka nnukwu arụmọrụ na-adịchaghị ala ma na-arụ ọrụ dị ala, na-eme ka ihe na-akwụsị akwụsị ma na-akwụsịtụ. O nwere ike welie mkpụrụ uru na rheology nke mmiri mmiri bekee, si otú ọ dị mfe inwe insoluble Efrata (granual, mmanụ dobe) kwụsịtụrụ na ala onunu ogwu. A na-ejikwa ya na ngwa HI&I na usoro ndị ahụ ebe nkwụsi ike na ịba uru bụ isi chọrọ. C ...
Aha: Carbomer676 Carbopol676 Carbomer 676 Carbopol 676 polymer bụ polima nke jikọrọ njikọta polyacrylic acid. Ọ nwere njirimara dị mkpirikpi na arụmọrụ dị elu. Akwadoro ka ejiri ya mee ihe na nriaka akpaaka, ndị na-ehicha elu ala, usoro nhicha ụlọ, gelled mmanụ na usoro ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Ọ nwere ezigbo viscosity kwụsie ike na ọnụnọ nke chlorine ịcha ọcha ma nwee ezigbo nrụpụta na sistemu pH dị elu. Njirimara na Uru Short flow rightt ...